Marketing Analytics 101: Asehoy ahy ny vola! | Martech Zone
Marketing Analytics 101: Asehoy ahy ny vola!
Talata, Septambra 30, 2008 Talata, Febroary 16, 2016 Douglas Karr
Rehefa nanoratra lahatsoratra ho an'ny Talent Zoo tamin'ny volana lasa teo aho dia nanoratra fampiasana ny automatisation sy ny fampidirana mba hampitomboana sy hampiasana ny paikadinao an-tserasera, ary koa ireo orinasa manampy ny orinasa hanatanteraka ireo varotra automatisation marketing.
Minitra vitsy lasa izay dia nandefasana mailaka avy tamin'i Andrew Janis of Evantage Consulting amin'ny Whitepaper vaovao navoakan'izy ireo ary mahaliana ny valiny. (Ny sasantsasany amin'ny synopsis etsy ambany dia nosoratan'i Andrew tamin'ny mailaka nalefany… Tsy ho afaka hiteny an'io koa aho!)
Ny State of Marketing Analytics
Ity Whitepaper dia mamintina ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Evantage Consulting mba hahitana ny fiantraikan'ny Analytics amin'ny ekipa marketing sy fikambanana iray manontolo.
Ny gazety dia mitatitra fa na dia mandany fotoana sy enti-miasa bebe kokoa aza ireo orinasa Analytics, ny ankamaroany dia mbola miatrika ny fanamby amin'ny fanovana ny angona ho hetsika. Na dia natao lasibatra tao amin'ny Twin Cities aza ny fanadihadiana, mino aho fa hitohy ny valiny manerana ny orinasa.
Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia mampiasa vola bebe kokoa amin'ny Analytics ary loharano, fa ny fiovana amin'ny marketing ara-data dia tsy zava-misy amin'ny ankamaroan'ny fikambanana.
Manomboka miroso mankany amin'ny dolara marketing haino aman-jery azo refesina kokoa.
Misy vondrona mpanakanto sangany ambony izay naka marketing data-driven am-po.
Ny fitantanana no lakile amin'ny fanaovana ny tetezamita mankany amin'ny marketing nomen'ny data, ary miadana ny fidirana amin'ny sambo.
Raha fintinina, fomba fijery be fanantenana amin'ny marketing izy… manomboka manomboka mampiasa teknolojia tokoa ireo orinasa, mandrefy ny valiny ary manitsy mifanaraka amin'izany. Manomboka izy ireo azoko! Maty ny varotra faobe, ny firongatry ny varotra kendrena amin'ny tranonkala dia mahazo vahana ihany amin'ny farany.
Asehoy ahy ny vola!
Ny mpivarotra mivantana sy ny tahiry dia nikiakiaka an'izany nandritra ny taona maro… mampatsiahy ahy ny momba an'i Cuba Gooding ao amin'i Jerry McGuire izay niantsoantso azy hoe: "Asehoy ahy ny vola!". Ny filohan'ny orinasa tsirairay dia tokony hiantsoantso zavatra mitovy amin'ny departemantan'ny marketing.
Vaovao tsara ho an'ny mpanjifa sy ny mpivarotra koa izany. Rehefa miharihary amin'ny dokam-barotra lasibatra sy tena misy vidiny ireo mpanjifa, dia mamaly izy ireo. Rehefa manao ny tsara ny mpivarotra dia miaiky izy ireo fa mahomby ny ezaka. Raha tsy mametraka ianao fiovam-po tanjona, manara-maso ny valiny ary manao fanitsiana, manipy ny zana-tsipìka amin'ny maizina fotsiny ianao.
Azonao atao ny misintona ny Whitepaper amin'ny Marketing Analytics avy amin'ny Evantage. Avy amin'ny tranonkalan'ny orinasa: Hatramin'ny 1999, Evantage Consulting dia nanampy ny e-orinasa hahomby amin'ny fampifanarahana ny varotra, ny asany ary ny singa IT? ho an'ny fahombiazana faran'izay betsaka sy fahombiazana.
Tags: loko volaevantageconsultant evantageasehoy ahy ny volataratasy fotsyWhitepaper
Miblaogy ve ianao?
1 Okt 2008 amin'ny 6:29 PM
Manaiky aho fa lasa lasibatra hatrany ny zava-drehetra. Rehefa manomboka ny orinasako manokana aho ary mijery ireo safidin'ny doka dia hitako fa manara-maso data tsy tapaka aho. Inona ny doka mahazo tsindry izay tsy. Avy eo manandrana mamantatra ny antony sy manolo ireo izay tsy voatsindry izay heveriko fa ho kitihina.
Miorina manodidina ny hoe iza ny tsenanao kendrena ary inona no tena tadiavin'izy ireo hojerena. Ny olona amin'ny ankapobeny dia mankahala ny dokam-barotra saingy tsapako fa noho izy ireo nokapohan'ny doka tsy nokendrena hatry ny ela. Raha apetrakao eo anoloan'izy ireo ny zavatra mety ho hitan'izy ireo fa mahasoa dia ho hitan'izy ireo ny dokao manampy ny atiny misy amin'ny tranokalanao.